MACLUUMAADKA TARANKA EEY BEERSHIYA BEERSHIYA - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eey Beershiya Beershiya
Simba Persian Mastiff (Sarabi Dog) hal sano jir
Mastiff Beershiyaan ah
Faarisiga Sarabi Mastiff
Eyga Sarabi ee Beershiya waa mid weyn oo leh lafo culus oo aad u weyn molosser madaxa. Afka ballaaran ma ahan mid aad u dheer ama aad u gaaban. Waxay leedahay xoogaa dharab ah oo ka yar noocyada kale ee waaweyn, laakiin bushimaha kore ayaa hoos u dhacaya. Indhuhu waa yicib qaabeeya midab jaalle mugdi ah. Dhabarka ayaa toosan. Lugaha waa lafo culus. Dabada qaro weyn waa dhaadheer oo qaabaysan oo qaabaysan. Eyga Sarabi ee Beershiya badanaa wuxuu ku yimaadaa midabyo bunni ah oo leh maaskaro madow iyo midab madow oo adag. Qaar ka mid ah xabadka cad ayaa la aqbali karaa. Koodhku wuxuu leeyahay laba nooc, gaagaaban iyo dhexdhexaad.
Eyga Sarabi ee Beershiya waa ilaaliyaha xoolaha iyo hantida. Noocani waa mid ka mid ah eeyaha ugu awoodda badan adduunka, oo leh jidh weyn, madax weyn iyo xoogaa qaniinyo qaniinyo leh. Aad daacad ugu ah milkiilaheeda iyo ka fog shisheeyaha . Waa ilaaliya xoolaha si hufan. Markasta oo bahal kasta oo dugaag ahi soo dhowaado eeygu wuxuu galayaa xaalad feejignaan leh dhago kacsan, dabada ku leh jilif aad u dheer si uu qof walba ugu digo. Eeygu guud ahaan wuu iska ilaaliyaa iska hor imaadka tooska ah, laakiin goorta la galayo ku soo xadgudbay soo dhowaada waxay istaagaysaa dhulkeedii iyadoo ku socota qaab cabsi gelin ah.
Dhererka: Lab: 32-35 inji (81-89 cm) Dheddig: 28-32 inji (71-81 cm)
Miisaanka: lab: 143-198 rodol (65-90 kg) qaarbaa gaari kara 220 rodol (100 kg)
Dheddig: 110-154 rodol (50-70 kg) Qaarkood way ka cuslaan karaan
Nooc aad u caafimaad qaba oo arrimo kooban leh. Qaarkood waxay u nugul yihiin dysplasia sinta.
Noocan laguma talinayo nolosha guriga. Waxay ubaahanyihiin boos waxayna kufiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn. Eyga Sarabi ee Beershiya ayaa la qabsan kara cimilo kasta laga bilaabo heer kul aad u hooseeya ilaa kuleylka xagaaga oo leh hoy ku habboon.
Eeyga Beershiya ee loo yaqaan 'Sarabi Dog' waa in la qaataa socod maalinle ah haddii aanu ahayn eey shaqeeya oo firfircoon si uu uga caawiyo sii deynta xooggiisa maskaxeed iyo jidheed. Waxay ku jirtaa dabeecadda eyda in la socdo. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha.
Noocan molosser wuxuu noolaan karaa 12 ilaa 15 sano.
Qiyaastii 6 ilaa 8 eyyo
Jaakadan noocan ah ee weyn waxay ku timaadaa noocyo kala duwan oo dherer gaaban iyo dhexdhexaad ah. Waxay ubaahantahay cadayasho marmar ah. Waa daadshe dhexdhexaad ah.
Sarabiyiinta Beershiyaanka ama reer Faaris Mastiff waa ilaaliyaha xoolaha iyo eyga ilaaliyaha hantida kaas oo ka soo jeeda woqooyiga Iiraan (Sarab Ardebil). Waxaa la sheegaa inuu ka soo farcamay eeyo waaweyn oo reer Asuriya ah ama eeyo dagaal oo ah Beershiyadii Hore.
king corso god dibi isku dhafan
Volga Beershiyiintii Beeriga ee Sarabi Ey ahaan waxay ahayd eey 4 bilood jir ah kana timid Iiraan
Arraz waa Eeygii reer Beershiya ee Sarabi Ey ahaa eey yar oo 6 bilood jir ah kana yimid Iiraan
Arraz waa Eeygii reer Beeriya ee Sarabi Ey ahaa eey yar oo 5 jir ah kana timid Iiraan
Arraz Mastiffkii Beershiya (Eeygii Sarabi) eey ahaa oo 1 bilood jir ah kana yimid Iran— 'Arraz wuxuu ka soo jeedaa qoys caan ah oo halkaan lagu muujiyo isagoo bil jira waana nin.'
Ey Sarabi ah oo Beershiyiin ah oo Iiraan ku yaal— 'Eyga Sarabi Beershiya waa eeyga ugu fiican adduunka.'
Ey Sarabi Beershiyiin ah oo ku sugan Iiraan
sida aad naftaada la dhiso sida eey Alfa
sawirrada eeyaha shaybaarka madow
shaybaarka madow muqisho isku darka mastiff
foxhound Maraykan darka shaybaarka madow
tobanka ey ee ugu sareeya 2015
adhijirka jarmalka husky alaskan malaamute mix